System Password [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » System Password [Problem]
1 System Password [Problem] on 28th December 2009, 2:53 pm
vista မှာ system password ခံထားတယ်လို့ပြောတယ်... အဲဒိမှာ password မေ့သွားရင်ဘယ်လိုကျော်ဝင်မလဲဟင်... သိရင်ပြောပေးကြပါခင်ဗျာ... နောက်ပြီးအဲဒိ system password ဆိုတာကိုဘယ်လိုသုံးရလဲမသိဘူး.. ဘယ်လိုလုပ်ရလဲခင်ဗျာ..
2 Re: System Password [Problem] on 28th December 2009, 5:21 pm
System Password ဆိုတာက BIOS Password ကိုပြောတာနဲ့အတူတူပဲလားဗျ။
နောက်ပြီး System Password ခံထားတယ်ဆိုတာကရော ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာလဲ။
တကယ်လို့ BIOS Password ဆိုရင်တော့ CMOS battery ကိုဖြုတ်ပြီးပြန်တပ်လိုက်ရုံပဲ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ကျနော်တို့ Hacking Zone ထဲမှာ window ပေါ်ရောက်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ BIOS Password ကိုဖျက်နည်းရေးပေးထားတယ်ထင်တယ်။ ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
3 Re: System Password [Problem] on 28th December 2009, 5:27 pm
ဟင်အင်းမတူလောက်ဘူးထင်တယ်နော်... System ကသပ်သပ်ပါ...မတူဘူး
4 Re: System Password [Problem] on 28th December 2009, 7:36 pm
Eracobengo wrote: ဟင်အင်းမတူလောက်ဘူးထင်တယ်နော်... System ကသပ်သပ်ပါ...မတူဘူး
အကိုတို့ရေ... ကျနော်ကတော့သိပ်နားမလည်လို့မစမ်းရဲဘူး.. ရုံးကအလုပ်တွေလည်းရှိနေလို့... Run ကနေ syskey ကိုရိုက်လိုက်ရင် အဲဒိကနေ system password ကိုထားလို့ရပါတယ်တဲ့... အဲဒါက ဘယ်လိုတွေအလုပ်လုပ်လဲတော့ကျနော်လညး်မစမ်းဘူးတော့မသိဘူး... တော်ကြာရုံးမှာ ပြဿနာတတ်မှာစိုးလို့.... သူက ကျနော်ကြားဖူးတာကတော့ window စစတတ်ခြင်း မှာ password လာတောင်းတယ်ပြောတာပဲ.... အဲလိုစက်တစ်လုံးရဲ့ password ကိုမေ့နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကျော်ရမလဲခင်ဗျာ... ကူညီပါဦး....
5 Re: System Password [Problem] on 29th December 2009, 4:55 pm
ဟ syskey ဆိုပါလား .. အဲဒါ သော့ခတ်တာ ဟုတ်ဝူးလား .. [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: System Password [Problem] on 29th December 2009, 5:53 pm
7 Re: System Password [Problem] on 31st December 2009, 7:25 pm
mars wrote: ကျနော်ကမသိတဲ့သူလေအကို.... သိသူများဖြေပေးပါ....
8 Re: System Password [Problem] on 1st January 2010, 3:30 pm
အင်း ကျနော်က ခု ဖြစ်နေတာကို နားမလည်သလိုဖြစ်နေလို့ .. ဘယ်နားမှာပေါ်တာလဲ မသိလို့ .. account နေရာဆိုရင်တော့ နည်းတွေက တော့ရှိပါတယ် .. ကျနော်သိတဲ့ syskey
က ကြားဖူးတာနော် .. diskette ထည့် ပြီးရင် အဲကောင်နဲ့ ခတ် .. ပြီးရင် shutdown ကျ သွားတယ် .. ပြန်ဖွင့်ရင် Disk ထည့်မှ ပွင့်တယ် .. ဟုတ်မလားမသိဘူး [You must be registered and logged in to see this image.]
9 Re: System Password [Problem] on 2nd January 2010, 8:43 am
٨††∂¢қєř wrote: System Password အကြောင်းကို မသိဘဲနဲ့ ၊ ဘယ်လိုသုံးတယ် ၊ ဘယ်နေရာမှာ အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကို မလေ့လာဘဲနဲ့ ကျော်တာတို့ လုပ်လို့မရဘာဘူး။
ကျနော် system password အကြောင်းကို လေ့လာနေပါတယ်။ လေ့လာတယ်ဆိုတာလည်း ထူးထူးထွေထွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်း google နဲ့ wiki မှာပဲဖတ်နေတာပါ။ ပြီးရင်ပြန်ရေးပေးပါ့မယ်။ သူ့အကြောင်းကိုသိမှပဲ သူ့ကိုတစ်ပါတ်ရိုက်လို့ရမှာပေါ့။
အခုလိုဖြေပေးတာကျးဇူးတင်ပါတယ်... ကျနော်နည်းနည်းလောနေလို့ပါ... password တောင်းတာက window တတ်တတ်ခြင်းမှာပါ... အရင် window password တောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာမဟုတ်ပါဘူး... Dos Screen တတ်တတ်ခြင်းမှာတောင်းတာပါ... ဒါပေမယ့် BIOS Password လိုမျိုး Battery ဖြုတ်လိုက်လညး်မရပါဘူး... ဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲဆိုတာကျနော်လညး်မသိပါဘူး....ကျနော်သိချင်လို့ အဲဒိလိုမျိုးဆိုရင် ဘယ်လိုဆော့ဝဲလ်ကိုသုံးပြီးကျော်မလဲဆိုတာရယ်... ကျော်တယ်ဆိုတာက ဘယ်လိုနညး်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် window ပေါ်ရောက်ပြီး သုံးချင်တယ်.. password reset ပဲလုပ်ရလုပ်ရ.. အဲလိုမျိုးပြောတာပါ.. နောက်ပြီး အဲလိုဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနညး်နဲ့ လုပ်ထားလဲဆိုတာရယ်ပါ.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
10 Re: System Password [Problem] on 15th March 2010, 6:47 pm
ကျွန်တော် လဲ အဲဒါလေးသိ ချင်နေလို့ပါ သိတဲ့သူများ ပြောပြပေးပါအုန်း
11 Re: System Password [Problem] on 15th March 2010, 7:58 pm
ဒါနဲ့ပတ်သတ်လို့ ကြားဘူးတာရှိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လုံးဝ မစမး်သတ်ဖူးသလို လုံးဝလဲမကြုံဘူးပါဘူး။ ဆရာကတော့
ဂျမ်ဘာ ချိုးလိုက်ရင်ရတယ််လို့့ပြောဖူးတယ်ဗျ... ပြောတာလဲတော်တော်ကြာနေပါပြီ။ နောက်ထပ်လဲတစ်ခါမှ ထပ်
မပြောတော့လို့ သေချာတော့မသိတော့ပါဘူး....သူပြောတဲ့password ကsystem လား account လားလဲသေချာ
12 Re: System Password [Problem] on 19th March 2010, 9:27 pm
13 Re: System Password [Problem] on 19th March 2010, 9:31 pm
ဒါက နောက် တစ်ခု ဖတ်ကြည့်ပါ
14 Re: System Password [Problem] on 19th March 2010, 9:35 pm
ဒါကလည်း တစ်မျိုး ဖတ်ကြည့်ပါ စမ်းကြည့်ပါ
15 Re: System Password [Problem]